B2B: Ungawakha Kanjani Ifaneli Ephumelelayo Yezizukulwane Zezokuxhumana | Martech Zone
Inkundla yezokuxhumana iyindlela enhle yokwenza ukukhiqiza ithrafikhi nokuqwashisa ngomkhiqizo kodwa kungase kube inselele ekukhiqizeni imikhondo ye-B2B. Kungani inkundla yezokuxhumana ingasebenzi kahle njengefaneli yokuthengisa ye-B2B nokuthi ungayinqoba kanjani leyo nselele? Ake sizame ukukuqonda!
Izinselelo Zesizukulwane Esiholayo Kwezokuxhumana
Kunezizathu ezimbili ezibalulekile zokuthi kungani izinkundla zokuxhumana kube nzima ukuziphendulela zibe iziteshi ezikhiqiza umthofu:
Ukumaketha kwenkundla yezokuxhumana kuyaphazamisa - Kungakhathaliseki ukuthi uqondisa kahle kangakanani isu lakho lezokuxhumana, inkundla yezokuxhumana ngokuvamile akuyona indawo lapho abantu benza khona ibhizinisi. Baphequlula ukudla kwabo kwezokuxhumana ukuze bathole abangani, umndeni kanye nabasebenza nabo esikhathini esidlule. Bangase babheke ukuphazamiseka enqubweni yabo yomsebenzi futhi babuke amavidiyo ajabulisayo noma ama-meme. Izixhumanisi zakho zenkundla yezokuxhumana ziphazamisa inqubo. Ngisho noma uqondisa lezo zibuyekezo kahle kakhulu futhi ufinyelela izethameli ozifunayo, ngokuvamile akusona isikhathi esifanele samathemba akho.
Uhambo lokuthenga oluyinkimbinkimbi kakhulu - Uma kuziwa ku-B2B, abakhangisi nabaphathi bezokuthengisa kufanele babhekane namayunithi okwenza izinqumo, abantu abambalwa abanganquma ukuthi umkhiqizo wakho uyinto abafuna ukutshala kuyo. Amayunithi okwenza izinqumo angase ahlanganise abaphathi (abasunguli, ama-CEO, i-VP, njll.) .), abaphathi (imenenja yezentengiso, imenenja yokuthuthukiswa komkhiqizo, imenenja yokusekelwa kwamakhasimende, njll.) kanye nomsebenzisi wokugcina (umuntu ozoba phambili esebenzisa umkhiqizo wakho, njengomhlaziyi we-SEO noma ithimba lokufinyelela isixhumanisi. ). Njengomphumela, uhambo lokuthenga lungathatha amasonto nezinyanga ngenkathi okunikezwayo kwakho kuhamba kusuka emnyangweni kuya komunye. Cishe akukho ukuthenga okungahleliwe endaweni okusebenza kahle kakhulu ekukhangiseni kwezokuxhumana. Udinga izindawo zokuthinta eziningi ukuze ukhumbuze amathuba akho ngawe kanye nomkhiqizo wakho.
Ungawakha Kanjani Ama-Lead kusuka ku-Social Media?
Nokho, inkundla yezokuxhumana isengasebenza kahle kakhulu ukuze ikhiqize umkhondo futhi isekele eminye imizamo yakho yokuhola. Nansi indlela.
1. Misa isimiso sakho sokulalela inkundla yezokuxhumana
Ukuqapha inkundla yezokuxhumana kubalulekile ekudaleni ifaneli yokuthengisa ephumelelayo. Ufuna ukwazi ukuba khona ukuze ubambe iqhaza ezingxoxweni ezifanele futhi uphendule okukhulunywe ngakho ezinkundleni zokuxhumana. Kuzokusiza futhi ukuthi uqonde amaqhinga okukhiqiza izimbangi zakho futhi uhlobane kangcono nezithameli oziqondise.
I-Awario inikeza isixazululo esibanzi sokulalela senkundla yezokuxhumana ongasisebenzisa ukuze uqaphe umkhiqizo wakho, amagama ezimbangi zakho, izingxoxo zezethameli ozihlosile, njll. Ngokusebenzisa isici sokusesha se-Awario se-boolean ungakwazi ukuqapha cishe noma yini. Ngaphezu kwalokho, i-Awario inikeza isici esibalulekile sokukhiqiza esikusiza ukuthi ubambe izingxoxo ezingase zibangele ukuguqulwa kalula.
Ngokungeziwe ekulaleleni kwenkundla yezokuxhumana, cabanga ukulandelela amaphrofayli abalulekile ezinkundla zokuxhumana ukuze uthole izinguquko ze-bio nesithombe sephrofayili: Lokhu kuzokuvumela ukuthi ubeke izindawo zakho zokuthinta kangcono lapho ithemba lakho likhuthazwa, libungaza ingqopha-mlando, noma limaketha okuthile okubalulekile, njengencwadi entsha noma umcimbi.
Ukubukwa kuyindlela enhle yokusetha lolu hlobo lokuqapha olukuvumela ukuthi uthole ukwaziswa mayelana nezinguquko ezivuliwe Instagram, Facebook, noma ngisho amakhasi avikelwe ngephasiwedi:
2. Dala ikhasi lokubikezela lenkundla yezokuxhumana (noma isayithi)
Kuningi okumele kushiwo mayelana nekhasi lokufika okufanele liguqule abacashe bezinkundla zokuxhumana babe umkhondo, futhi awekho amathiphu lapha azolunga. Kuzodingeka uzame futhi uhlole i-A/B kakhulu. Kunezimiso eziyisisekelo:
Kufanele, ngokusobala, kube neselula njengoba abantu abaningi befinyelela inkundla yezokuxhumana besebenzisa amadivaysi eselula
Kufanele ilayishe ngokushesha, futhi unikeze isigaba esibaluleke kakhulu kuqala ukuze singalahlekelwa abasebenzisi bezokuxhumana abangenasineke
Kufanele ibe nobufakazi bomphakathi obucacile, okungcono kakhulu obuvela kubagqugquzeli abaziwayo. Izibuyekezo zibaluleke kakhulu ekuguquleni ithrafikhi yenkundla yezokuxhumana
Ekugcineni, kufanele ibandakanye izivakashi zakho ngokushesha, isuse noma yiziphi izinyathelo ezengeziwe.
Ngokufanelekile, ufuna izivakashi zekhasi lakho zenze isenzo esisheshayo ngaso leso sikhathi.
Ukumema abavakashi bekhasi lakho ukuthi bakhethe i-slot yesikhathi sedemo yamahhala kuwumqondo omuhle ngoba lokho kuqeda inani lama-imeyili abuya naphambili futhi kufinyeza ifaneli yokuthengisa. I-Appointfix iwuhlelo lokusebenza oluwusizo oluvumela amathemba akho ukuhlela ucingo futhi alungeze ekhalendeni labo ngokuchofoza okukodwa kwegundane.
Omunye umqondo uku engeza ingxoxo ebukhoma inketho okuyindlela enhle yokubabandakanya enqubweni yokuthengisa ngokushesha.
Kwezinye izimo, ukunikeza okuthile mahhala ngaso leso sikhathi kuwukuphela kwendlela yokubandakanya ithrafikhi yakho yezokuxhumana. Akuwona umqondo omubi ukubenza babhalisele i-webinar yamahhala. Kunenhlobonhlobo enkulu yokuxhumana nabantu amapulatifomu webinar ikuvumela ukuthi usakaze bukhoma ezinkundleni zokuxhumana.
Kumafaneli athile wamapayipi, kunengqondo futhi ukumisa isayithi ehlukile ezohlukaniswa nomkhiqizo wakho oyinhloko. Isibonelo, ungakha i-newsletter ye-niche ehloswe kakhulu noma usethe inkundla ye-niche futhi wenze leso isinyathelo sokuqala kupayipi lakho.
Kulokhu, ukudala iwebhusayithi ehlukile kwenza umqondo ophelele. Asikho isidingo ukukhokha ton igama lesizinda, ungasebenzisa Qamba ukuze uthole ngokushesha isizinda esingabizi esizoba lula ukusifaka uphawu.
3. Qiniseka ukuthi izibuyekezo zakho (noma izikhangiso) ziyabandakanya ngempela
Ngokusobala, ayikho iresiphi eyodwa yokudala okuqukethwe okusebenzayo kwenkundla yezokuxhumana.
Kodwa nansi imibono embalwa ongazama ngayo:
Sebenzisa izithombe namavidiyo amaningi: Lokhu kuzosiza futhi ibhizinisi lakho ngokubonakala kwakho okuphilayo ngokusebenzisa amazinga esithombe kanye ama-carousels wevidiyo
Dala izinhlolovo zomdabu bese umemezela lokho okutholile kokuthunyelwe kokulandelela
Maka abagqugquzeli obasho kokuqukethwe kwakho ukuze ubatholele usizo lokukuphromotha
Buza imibuzo eminingi
I-Text Optimizer iyindlela enhle yokuthola imibuzo ethokozisayo ongayibuza ezinkundleni zokuxhumana futhi ubandakanye izithameli zakho eziningi:
Nali futhi umhlahlandlela omuhle wokwenza a isu lokuqukethwe kwenkundla yezokuxhumana.
4. Faka isikhathi ngezibuyekezo zakho noma izikhangiso zakho kahle
Isikhathi siyikho konke ekukhangiseni ezinkundleni zokuxhumana ngoba kukuvumela ukuthi ubhale ngaphezulu leso sigameko sokuphazamiseka esixoxile ngaso ekuqaleni.
Ezinye izibonelo zesikhathi esihle zihlanganisa:
Umcimbi we-niche ozayo wonke umuntu akhuluma ngawo
Ithrendi noma uguquko lwezomnotho olwenze umkhiqizo wakho waba usizo ikakhulukazi (cabanga nge-Zoom isebenzisa izikhangiso ezikude ngesikhathi sokuvalwa kwe-Covid)
Isikhathi sonyaka (isb. isizini yentela ezayo), njll.
izitayela Google kuyindlela enhle yokubikezela izitayela zesizini. Kungase futhi kukhawulelwe endaweni ethile:
5. Qopha kahle leyo mikhondo
Ukuhlela kubalulekile uma kuziwa esizukulwaneni esiholayo: Udinga ukwazi ngokucacile ukuthi ubani osuvele uxhumene naye, ukuthi lezo zindawo zokuthintwa beziyini kuze kube manje, nokuthi i-DMU ngayinye (iyunithi yokwenza izinqumo) ibukeka kanjani.
Yilapho kungena khona isixazululo esihle se-CRM.
Nasi isiqhathaniso esiqinile amapulatifomu amakhulu e-CRM ongakhetha kukho. Bheka isixazululo sesoftware esinikeza isici esiqinile sokuphatha ipayipi lokuthengisa futhi udale amaphrofayili aholayo anemininingwane.
6. Funa usizo kwabathonyayo
I-Influencer marketing iyisengezo esihle esizukulwaneni esiholayo esiqhutshwa yinkundla yezokuxhumana ngoba abantu bayabethemba abantu. Ukugibela amathonya ambalwa e-niche kuzokusiza ukuthi ukhiqize ukwethenjwa okuthile. Kuzokusiza futhi ukuthi uthole ukubuyekezwa okubalulekile nobufakazi ongakusebenzisa ekhasini lakho lokufika lenkundla yezokuxhumana.
Kukhona umhlahlandlela onemininingwane wokuthi kwenziwa kanjani win abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana ngaphandle koxhaso.
I-Awario inikeza ithuluzi lokumaketha elinamandla elikuvumela ukuthi ukhombe osaziwayo abancane bangempela ku-niche yakho nendlela engcono kakhulu yokusondela kubo:
7. Faka yonke ithimba lakho ohlelweni
Ukumaketha kwenkundla yezokuxhumana kubandakanya abantu abaningi kunethimba lakho labadayisi. Udinga ukuba nabaphathi bezokuxhumana ebhodini ngemizamo yakho ngoba yibona abathintekayo ohlelweni futhi kufanele njalo wamukele impendulo evela eqenjini lakho lokusekela amakhasimende ngoba yibona abahamba phambili ekuxhumaneni namakhasimende akho amanje.
Ngisho nethimba lakho lokuthuthukisa umkhiqizo lidinga ukubandakanyeka ngoba inkundla yezokuxhumana iyindlela enhle yokukhiqiza impendulo yesikhathi sangempela kumathuluzi akho.
Ngakho-ke ukugcina inkampani yakho yonke ibandakanyeka kule nqubo kuzozuzisa wonke umuntu futhi kukusize uthole imiphumela ebonakalayo nakakhulu emizamweni yakho. Uma ungaqiniseki ukuthi ungakwenza kanjani lokho, thatha lokhu Ukuhlolwa Kokuxhumana Okuhlanganisiwe ukukhomba indlela yokusetha inqubo.
8. Hlukanisa futhi umakethe kabusha izikhangiso zakho zenkundla yezokuxhumana
Okokugcina, inkundla yezokuxhumana iyisengezo esihle kuyo yonke imizamo yakho yokuhola ngoba ungaphinda uqondise abavakashi besayithi lakho ngokusekelwe ekuhlanganyeleni kwabo kwangaphambilini nesayithi.
Njengamanje zonke izinkundla zokuxhumana ezinkulu zinikeza isici sokumaketha kabusha:
Facebook (kanye ne-Instagram): Ungaphinda uqondise izikhangiso zakho kubantu abavakashele isayithi lakho, abaguqule, bashiye izinqola zabo zokuthenga, njll.
Twitter: Ungakwazi ukumaketha kabusha kubasebenzisi abakubonile noma abazibandakanya nawe ku-Twitter
LinkedIn: Ungakwazi ukukhomba kabusha izikhangiso zakho ngewebhusayithi, izikhangiso zevidiyo, Amafomu Ezinhlanga Eziholayo noma maduze ngomcimbi we-LinkedIn.
Ukumaketha ezinkundleni zokuxhumana kunenselelo eyodwa enkulu okumele ubhekane nayo: Kufanele uhlale ukhona ukuze ubone imiphumela. Lapho umisa, izinombolo eziholayo zizoqala ukudonsa. Ngakho-ke akukho ukukala lapha: Kuyinqubo eqhubekayo.
Izindaba ezinhle ukuthi, usebenzisa amathuluzi nezinyathelo ezingenhla uzokwazi ukusetha isu lokuhola elisebenzayo ukuze wenze okuhle kwethrafikhi yakho yezokuxhumana. Ngikufisela inhlanhla!
Ukudalula: Martech Zone isebenzisa izixhumanisi zabo ezihambisanayo kweminye imikhiqizo kulesi sihloko.
Tags: awariob2bb2b abathengi uhamboisizukulwane esihola phambili se-b2bCRMamapulatifomu e-crmgoogle izitayelaukumaketha kwamathonyauxhaso lwabagqugquzeliAbathonyaamavoti omdabupollukwahlukanisaukukhangisa komphakathiukulalela komphakathisocial mediaukuhlukaniswa kwezikhangiso zenkundla yezokuxhumanaisu lokuqukethwe kwenkundla yezokuxhumanaikhasi lezokuxhumana lokufikaimithombo yezokuxhumana ihola isizukulwanezokuxhumana ukulalelaukuhlukaniswa kwezokuxhumanauxhasomaliama-tag influencersisilungiseleli sombhaloTwitterezokuxhumana ezihlangeneizikhangiso ze-carousel zevidiyoukubuka ngamehlo engqondoyoutube